Casting Parts နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားရမယ့်အရာများ Taiwan မှ Casting Parts ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊
FORTUNE CAST CORPORATION တစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်ဖြစ် Casting Parts, ဆွဲငင်အားအစိတ်အပိုင်းများ, Intercooler အစိတ်အပိုင်းများ အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. ကျနော်တို့ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ပို့ကုန်တသမတ်တည်းမြင့်မားလူတန်းစားထုတ်ကုန်များနှင့်စဉ်ဆက်မပြတ်တရားမျှတစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျင့်ဝတ်ကိုမှစုစုပေါင်းဝန်ထမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့်တင်းကြပ်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာမှုအားဖြင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အလုပ်ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ ကျနော်တို့ကိုလယ်၌အများအပြားမူပိုင်ခွင့်ရပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစတိုင်များအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်အခမဲ့ခံစားရကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
အကောင်းဆုံး Casting Parts ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် Casting Parts မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ
ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ထုတ်လုပ်သည် Casting Parts အဓိကအားဖြင့် Gravity Casting အစိတ်အပိုင်းများ၊ Intercooler အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်ဘီးဘောင်အစိတ်အပိုင်းများ၊ သံမဏိစက်များနှင့် EGR အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဖြစ်သည်။ Casting သည်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးအရည်ပစ္စည်းများကိုမှိုသို့သွန်းလောင်း။ လိုချင်သောပုံသဏ္ofာန်ကိုအခေါင်းပေါက်ထဲထည့်ပြီးခိုင်မာအောင်လုပ်သည်။ ခိုင်ခံ့သောအစိတ်အပိုင်းများကိုသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးသောပုံသဏ္forာန်များပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပြုလုပ်ရန်ခက်ခဲခြင်းသို့မဟုတ်အသုံးမပြုရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှိုအစိတ်အပိုင်းများတည်ဆောက်ရန်အလူမီနီယမ်အလွိုင်းဆွဲငင်အားကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ကုန်ပစ္စည်း၏လက္ခဏာများအောက်ရှိအခြားပေးသွင်းသူများ၏မှိုများသို့ဂဟေဆက်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မတူကွဲပြားမှုများနှင့်သူတို့၏ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုသည်ဘဝ၏လိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်အတွက်အသုံး ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ဒီနေ့ Casting Parts အစိတ်အပိုင်းများမှအဆုံးထုတ်ကုန်အထိအမျိုးမျိုးသော application များတွင်စျေးကွက်အများအပြားအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ အဆင့်မြင့်နည်းပညာ၊ စိန်ခေါ်မှုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတောင်းသောအချိန်ကာလနှင့်တန်ဖိုးမြှင့်ခြင်းအတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားသည်၊ အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ လက္ကားနှင့်သေးငယ်တဲ့အသုတ်ထုတ်လုပ်မှုထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနှစ် ဦး စလုံးမေးမြန်းဖို့ကြိုဆိုပါတယ်။